Manchester City oo ugu cadcad inay la soo wareegto Dusan Vlahovic. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Manchester City oo ugu cadcad inay la soo wareegto Dusan Vlahovic.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay hogaamineyso tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic .
21-sano jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda ka ciyaarta Serie A ka dib qaab ciyaareedkii fiicnaa ee 2021 taasoo keentay inuu ka sare maro kaliya Robert Lewandowski kubada cagta heerka ugu sareysa sanadkan.
Kooxo badan ayaa la fahamsan yahay inay xiiseynayaan saxiixiisa, iyadoo sida Manchester United , Arsenal , Tottenham Hotspur iyo Juventus ay ka mid yihiin kuwa isha ku haya xaalada.
Vlahovic ayaa horay u diiday qandaraaskii ugu qaalisanaa taariikhda Fiorentina, taasoo ku qasbeysa La Viola inay ka fiirsadaan inay lacag ku helaan xiddigeeda sanadka soo socda ka hor inta uusan gelin 12-ka bilood ee ugu dambeeya qandaraaskiisa haatan.
Fiorentina ayaa lagu soo waramayaa inay qiimo lacageed dhan 100 milyan oo euros (£85m) dul dhigtay xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia.
Si kastaba ha ahaatee, La Repubblica ayaa ku warameysa in Man City ay weli hogaanka u heyso tartanka loogu jiro saxiixiisa , waxaana baacsiga ay wadaan uu yahay tababare Pep Guardiola , kaasoo u arka Vlahovic inuu yahay bedelka saxda ah ee Sergio Aguero .
Da’yarka ayaa si toos ah uga qayb qaatay 19 gool kulamadii ugu badnaa ee uu u ciyaaray Fiorentina xilli ciyaareedkan, halka uu dhaliyay 34 gool 44 kulan oo tartamada oo dhan ah 2021.
Raheem Sterling oo Baranaya Luuqada Spain xilli lala xiriirinayo Barcelona’
Manchester City weeraryahankeeda Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu baranayo luuqada Isbaanishka, iyadoo ay xiiseynayaan La Liga ka dhisan Barcelona . 27-sano jirkaan...
Goorta ay dhaceyso doorashada kursiga uu rabo Fahad oo la shaaciyey
Liverpool oo ku garaacday Chelsea xiddiga kooxda Celtic ee Ben Doak
MADAXWAYNE SHACBIYAD LEH QORSHIHIISUNA CAD YAHAY NEXT PRESIDENT?
Real Madrid oo Markii labaad Ku Guulaysan Doonta Horyaalka LaLiga...